Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ညမထွက်ရအမိန့် မလိုက်နာသူများကို စစ်တွေတွင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး
“ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီအထိ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ သွားလာ နေတဲ့သူတွေကို ဖမ်းပြီး စစ်ဆေးတာတွေ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
သူတို့ကိုလည်း ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြန်သွားကြ တာ တွေ့လိုက်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 09:45
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ညမထွက်ရအမိန့် မလိုက်နာသူများကို စစ်တွေတွင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး . All Rights Reserved